Serivisy fampiroboroboana milina tokana any Shina - Casting Minghe
Serivisy fanodinam-bola amin'ny milina CNC
Minghe dia manolotra milina cnc ao an-trano ho famenon'ny serivisy fanariana maty. Ireo milina CNC ireo dia mampiasa fomba iray ampanjifaina hanamboarana ireo faritra namboarina izay vonona ho amin'ny fanangonana vokatra.
Te hanafohezina ny tsingerin'ny famokarana ary hampihena ny vidin'ny singa ao amin'ny milina? Teknolojia mandroso marobe mifangaro, ny Serivisy Machining Machines dia afaka manatsotra ny fizotry ny famokarana ary manafaingana ny famokarana andiana masinina betsaka, ary koa manatratra haavo avo lenta kokoa.Minghe dia manome masinina CNC haingana amin'ny Internet arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Alefaso ny rakitra CAD na ny fanontanianao aminay, hiverina haingana ny fitanisana ireo singa CNC maimaim-poana.
Na prototypa haingam-pandeha na ampahany novokarina be dia be, dia manana ny safidin'ny machining CNC mifanaraka amin'ny filan'ny vy sy ny faritra fanariana izahay. Ataovy ao anaty masinina ny tetikasanao ao anatin'ny fotoana fohy.
Fa maninona no misafidy ny serivisy milina Cnc China?
Mpanjifa maro no misafidy ny serivisin'i Shina, saingy ny teboka roa ihany no tsy miraharaha azy: ny vidiny ambany sy ny kalitao mifanaraka amin'ny ilain'izy ireo. Saingy amin'ny fampandrosoana bebe kokoa ny fanatontoloana, ny vidiny dia tsy singa fampandrosoana intsony amin'ny fanombanana ny mpamatsy mahay.
Na dia manana haitao mandroso kokoa eo amin'ny lafiny fanavaozana sy ny fahaizan'ny famolavolana aza i Japon sy i Alemana, dia afaka mahazo fahaiza-manao feno ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana mpanome tolotra fikarakarana CNC sinoa.
Ao Minghe, dia mijery bebe kokoa ny marina sy ny kalitao izahay. Ny machining CNC dia sokajy kely fotsiny amin'ny orinasanay, manadinika bebe kokoa ny fiaraha-miasa matotra sy maharitra izahay.
Minghe dia manome anao ny fahaiza-mamokatra sy ny fahaizan'ny milina isan-karazany ho an'ny faritra EDM na dia ny fandeferana faran'izay henjana indrindra aza, ny géometrika anatiny be pitsiny indrindra, na ny fepetra takiana amin'ny fampitomboana.
Ny fahaiza-manao amin'ny serivisy CNC Machining
Amin'ny maha iray amin'ireo serivisy mpamokatra haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha any Shina sy orinasan-tsolika maty, ireto fahaiza-manao masinina manaraka ireto ao Minghe dia misy hanomezana ny filanao ny faritra masinina vita amin'ny milina, manomboka amin'ny prototyping haingana ka hatramin'ny faritra mazava sy ny milina fanodinana fitaovana, hatramin'ny famokarana farany fampiasana.
Ny fikosoham-baravarankely ampiasaina amin'ny fikirakirana ireo ampahany prismatic.
Ny CNC Turning dia mampiasa toolling matetika hanodinana workpiece mihodina
Izy io dia ampiasaina amin'ny fametahana masinina kely amin'ny bara
Matetika ampiasaina handrindrana ireo faritra sarotra.
Machining mety amin'ny tabilao, kapila, bobongolo ary akorandriaka kely
Realizing Milling amin'ny alàlan'ny mekanika fametahana spindle
China Minghe CNC Machining Fitaovana
Serivisy Machining Minghe CNC miasa miaraka amin'ny Conventional Alloy 、 Super Alloy sy plastika.
Aluminium: 2024, 5083, 6061, 6063, 7050, 7075, sns.
Firaka: varahina 360, 101 varahina, varahina 110, varahina 932, zinc, sns.
Titanium: kilasy 2, kilasy 5, sns.
Vy vy: 303, 304, 410, 17-4, 2205 Duplex, 440C, 420, 316, 904L, sns.
Steel: 4140, 4130, A36, 1018, sns.
Ascolojia / Karpa 49
Inconel / Monel / Fitaovana vy
PEEK (Polytera Ether Ketone)
PMMA (Polymethyl Methacrylate na acrylic)
PTFE (Polytetrafluoroethylene), sns.
Vita ny tontolon'ny Ming Minghe
Azonao atao ny misafidy karazana serivisy famaranana metaly vita amin'ny metaly aorian'ny fametahana milina ao amin'ny milina Minghe CNC na mpanamboatra fanariana maty hanatsarana ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny fahombiazan'ny ampahany amin'ireo masinina noforoninao.
Fampiharana an'ny MINGHE CNC Machining Services
Ny faritra misy ny masinina CNC dia manodidina anao, mety ho singa manan-danja amin'ny fiaranao izy ireo ary afaka manatanteraka asa lehibe amin'ny fitaovanao elektrika. Minghe dia mpamatsy cnc vita an-tsitrapo izay mirotsaka amina rindrambaiko milina CNC marobe.
Ny ampahany amin'ny famokarana dia mety amin'ny indostria manaraka:
Ny tombony azo avy amin'ny serivisy Machining CNC Minghe
Orinasa masinina CNC mahomby amin'ny famokarana betsaka ny serivisy prototyping haingana
Salanisan'ny 7 andro fihodinana ary 99.85% amin'ny fandefasana fotoana
Safidy marobe amin'ny fitaovana milina hihaona amin'ny fananana manokana.
Fanononana maimaimpoana maimaimpoana ao anatin'ny 24 ora aorian'ny famotopotorana
Fahafaham-po sy fahatokisana ny mpanjifa avo
Fanandramana manan-karena sy famokarana manankarena
ampitomboina ny mandeha ho azy.
Fahadisoana kely indrindra
Mahomby ny serivisinay.
Volume: 1-20 + Fizarana
Teny nindramina: Ao anatin'ny 24 ora
Fotoana fitarihana: miditra haingana toy ny 3 andro
Fitaovana: metaly sy plastika
Ampaham-ampahany: Manomboka amin'ny 10 in. X 7 in. X 3.75 in ka hatramin'ny 22 in. X 14 in x 1.25 in
Fandeferana mahazatra: +/- 0.1mm